Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo ku wajahan Magaalada Gaalkacyo - Awdinle Online
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo ku wajahan Magaalada Gaalkacyo
Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug ayaa waxaa gaaray Wafdi ka kooban Wasiiro ka tirsan Galmudug kuwaas oo hordhac u ah Wafdiga Ra’iisul Wasaaraha iyo Madaxweynaha Galmudug oo Gaalkacyo ku wajahan.
Wasiirka Warfaafinta oo wafdiga kamid ah ayaa sheegay in wafdiga Ra’iisul Wasaaraha halkaasi tegi doonaan, isla markaana looga baahan yahay maamulka degmada iyo Bulshada inay siwyen u soo dhaweeyaan.
Sidoo kale waxa uu sheegay Wasiirka in Wafdiga Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya & Xubno ka tirsan Beesha Caalamka ay ka qeyb-geli doonaan munaasabad lagu caleemo saarayo Maamulka Cusub ee degmada Gaalkacyo oo ay Golaha degaanka doorteen.
Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug ayaa waxaa siweyn looga dareemayaa qaban qaabada Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya & wafdiga la socdo oo haatan ku sugan degmada Cabduwaaq ee gobolka Galgaduud.
Previous articleMusharax Daahir Geelle oo weerar afka ah ku qaaday Madaxweyne Farmaajo
Next articleDowladda oo Ciidamada uga digtay inay dhibaateeyaan Shacabka